MicroPad, ngwa ntinye otutu di nma maka idetu ihe | Site na Linux
MicroPad, ngwa ngwa ikpo okwu mara mma maka idetu ihe
Otu n'ime ihe dị ezigbo mkpa na sistemụ arụmọrụ na na n'otu oge ahụ bụ ihe dị mfe, na-ndetu-ewere ngwa. Ma ọ bụ na agbanyeghị na ị nwere ike ịtụkwasị obi na ngwa ndezi ederede nke enyere na ụlọ ọrụ ọfịs, ha anaghị enwekarị ngwaọrụ kwesịrị ekwesị iji nwee ike ịchekwa ozi achọrọ n'oge ahụ.
Ọ bụ ya mere taa anyị ga-ekwu maka ya ezigbo ngwa nke aha ya bu "MicroPad" nke bu ihe eji eme ihe n’efu. Nke a bụ ihe edeturu ihe edeturu na-enyere gi aka ichikota ma detuo ihe n’enweghi mgbochi.
Otu n'ime njirimara kachasị iche site na MicroPad bụ ojiji nke Invas Canvas, nke na-ewepu mgbochi mgbochi na ebe ọrụ.
Iji finiteanvas na-enweghị njedebe Ọ na - enye gị ohere ịhazi ndetu gị ma na - enyekwa gị ohere ịhazi echiche na echiche gị n'ụzọ ọhụụ.
Ihe ndekọ ọ bụla nwere ike ịnwe ọnụ ọgụgụ na-enweghị njedebe, ya na ndetu na nkebi. Nke a na - enye gị ohere iji Notepad na - agụnye ihe niile site na ịde akwụkwọ nhazi iji hazie mmepe ngwa.
Akụkụ ọzọ nke ngwa a bụ na na-enye gị ohere ịmepụta ederede ederede na ederede Markdown, ndetu eserese, eserese ) na ngụkọta oge, mgbakọ na mwepụ, na ntinye ederede ntinye.
N'aka nke ọzọ ọ na-enye ohere ịgbakwunye mkpado na post ọ bụla, yana ịkọwapụta oge ịgba ọsọ, na-enye ohere ka MicroPad jikọta ihe edeturu, gụnyere ndị sitere na ngalaba dị iche iche, ma debe ụbọchị ha kwesịrị.
N'ikpeazụ ọzọ nke nnukwu atụmatụ nke ngwa a bụ na -atọ ndị ọzọ ngwa nwere ike mfe a ga-eji encrypt na mmekọrịta na ígwé ojii ọrụ. MicroPad nwere ike ịrụ ọrụ na windo na ihuenyo zuru oke, na-akwado ịgbanwe isiokwu ahụ (enwere isiokwu ise dị), na mgbakwunye na ịbubata ndetu site na ndekọ na akwụkwọ Markdown ọ bụla, ọ nwere ike ibupụ ndekọ na faịlụ ZIP nwere NPX (*. npx) ma ọ bụ Markdown (* md) na ọtụtụ ndị ọzọ.
Etu esi etinye Micropad na Linux?
Maka ndị nwere mmasị ịwụnye ngwa a na nkesa Linux ha, ha nwere ike ịme ya site na isoro ntuziaka anyị kesara n'okpuru.
Micropad mmepe na-enye dị iche iche echichi nchịkọta maka Linux, nke enwere ike itinye ngwa ahụ ma ọ bụ site na ụgwọ, Snap ma ọ bụ AppImage.
N'ọnọdụ ndị ahụ ndị ọrụ Debian, Ubuntu ma ọ bụ nkesa ọ bụla ewepụtara nke ndị a ma ọ bụ jiri nkwado maka ngwugwu ụgwọ na nke ahụ họrọ iji wụnye ngwugwu ụgwọ, ị nwere ike ibudata ngwugwu site na njikọ dị n'okpuru.
Ma ọ bụ site na ọnụ site na ime iwu ndị a:
Emechara nbudata, ugbu a, anyị ga-aga n'ihu ịwụnye ngwugwu ahụ ya na onye njikwa ngwugwu anyi choro ma obu site na njedebe na iwu:
Ugbu a maka ndị na-ahọrọ iji nchịkọta Snap, ha nwere ike iwunye ngwa ahụ site na ngwa ngwa ngwa Snap ma ọ bụ site na ịpị iwu na-esonụ:
N'ikpeazụ, maka ndị na-enweghị nkesa na-akwado ngwugwu ụgwọ ma ọ bụ teknụzụ ngwugwu snap ma ọ bụ na ha achọghị ịwụnye faịlụ ndị ọzọ na sistemụ ha. Ha nwere ike iji ngwungwu ngwa AppImage.
Maka nke a, anyị ga-ebudata faịlụ ahụ site na njikọ na-esonụ. Ma ọ bụ site na ọnụ site na ịpị n'ime ya iwu na-esonụ:
Mere nke a, ugbu a, anyị ga-enye ikike igbu na faịlụ na iwu na-esonụ:
Ha ga-enwe ike ịgba ọsọ ngwa ahụ site na ịpị faịlụ ebudatara ugboro abụọ ma ọ bụ site na njedebe na iwu ahụ:
N'ikpeazụ otu usoro ikpeazụ inwe ike ịwụnye ngwa a na Linux, na-achịkọta koodu na sistemụ ahụ.
Iji mee nke a na ọnụ anyị ga-pịnye ihe ndị a:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » MicroPad, ngwa ngwa ikpo okwu mara mma maka idetu ihe
Museeks, onye na-egwu egwu egwu ọtụtụ wuru na elektrọn
Ka anyị Encrypt kwupụta ọkwa ikike akwụkwọ ọhụụ